ukhona lapha: Ikhaya Ukunakekelwa
Izimbangela zezifo izinwele
Trichology ibizwa omunye izihloko eziningi zokwelapha, okuhloswe ngaso uphethwe, ukwelashwa, kanye nokuvinjelwa kwezifo kanye ekutadisheni izinwele kanye ekhanda. Izimbangela zezifo izinwele ukuze Isimo esibi izinwele, futhi, efana isikhumba enoboya, kungabangela ezahlukahlukene, phakathi lapho kufanele kuphawulwe: izifo yezitho zangaphakathi nokuvikeleka ongaphakeme; iziyaluyalu hormone futhi ezingalapheki … Continue reading Izimbangela zezifo izinwele →
okuningi: Izimbangela zezifo izinwele
Haircut female "cap"
izinwele ezinde - liwumhlobiso wangempela fashionista, nento umuzwa wokuqhosha kuye. Kodwa munye kuphela khona izinwele ezinde akwanele: kufanele banike ivolumu ukuma, ukugcizelela amathuba abo ukugunda izinwele enhle futhi ubeke izinto ngononina ngoba ubuso lomumo wakho. Uma kwekhanda ukhethwa ngendlela lefanele ngekwesayizi uhlobo izinwele zakho, Ungaqiniseka, ukuthi sidonse amehlo nokumangala.
okuningi: Haircut female "cap"
ukugunda izinwele zabesifazane – indlela ukukhetha?
Ukuze noma imuphi omunye wesifazane kukhethwa ngesitayela esisha sezinwele cishe njalo – emaphilisini ekhanda benesifiso afeze ukuhlolwa, futhi makungabikho nakanye,, uyohluleka.
okuningi: ukugunda izinwele zabesifazane – indlela ukukhetha?
Noma yimuphi umuntu wesimame uyazi, njengoba ngesinye isikhathi kunzima ukuthi akhethe noma iyiphi ukugunda izinwele. Owesifazane ufuna nakanjani ukugcizelela izici zobuso, umbukiso izinwele, ubuhle bayo bese uthole isithombe esithile ezithakazelisayo.
okuningi: Yabesifazane ukugunda izinwele ukuxubana
kwamagoda Afrika ziye kwakuqala ukwanda okukhulu phakathi kwentsha. Phela, kuyinto enhle kakhulu, imfashini stylish. Abaningi ukubheka guys noma amantombazane ne izinwele futhi ngizibuze: "Kuyamangaza, nokuthi ukuba sifake Afrika kwamagoda?»
okuningi: Indlela sifake Afrika kwamagoda?
ikhasi 1 kusukela 6
izinwele isandiso, izindleko.
Ukubeka ku nezinwele ezimfishane